Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Faysal Cali waraabe iyo Galayr – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Faysal Cali waraabe iyo Galayr
Luulyo 18, 2018 9:29 g 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium-ka wuxuu kula kulmay Guddoomiyaha xisbiga UCID Feysal Cali Waraabe iyo Hoggaamiyaha Khaatuma Cali Khaliif Galeyr.
Kulankan oo qaatay saacad iyo wax ka badan ayaa waxaa codsaday Madaxweyne Farmaajo, iyada oo looga hadlay arrimo la xiriira Soomaaliya iyo Somaliland.
“Halkan waxaan u nimid inaan kaambeyn gareyno qoondada Somaliland ee shirka Brussels, kheyraadka la bixiyo inaan qeybteena ka helno, masuuliyad baa iga saaran Somaliland, keliya ma ahan markaan xil qabto inaan shaqeynayo balse mar walba waan u doodaa xuquuqda Somaliland.” Ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Sidoo kale Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa sheegay kulanka ay la yeesheen Madaxweyne Farmaajo inuu ku soo dhamaaday is fahan, isaga oo sidoo kale sheegay inay ka dalbadeen in xanafta laga fogaado, si uu u yimaado isku soo dhawaansho.
“Runtii Madaxweynaha isaga ayaa naga codsaday kulanka waana ka aqbalnay, waxaan u sheegnay in xilligan aanan loo baahneyn dhibaato, waxaanu siinay aragti waalidnimo, maadaama aan ka weyn nahay, waxaanu ka codsanay in dib loo bilaabo wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland, nabada ayaanu ka shaqeynaynaa, Farmaajo hadii uu diyaar u yahay horay u socod haka furo Hargeysa Safaaradda Soomaaliya.” Ayuu markale yiri Guddoomiyaha xisbiga UCID oo la hadlay BBC-da.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in Soomaaliya iyo Somaliland looga baahan yahay inay ku daydaan Itoobiya iyo Ereteriya oo in ka badan 20 sano colaad ay ka dhaxeysay heshiiyay.